Jasiiradaha Badweynta Hindiya ee Vanilla Pro Am
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Jebinta Wararka Safarka » Jasiiradaha Badweynta Hindiya ee Vanilla Pro Am
Dalxiisayaasha Vanilla Islands Pro Am Tours waa dhacdo golfing ah oo si isdaba joog ah loo abaabulay laba jasiiradood oo ku yaal Badweynta Hindiya. Waa tartan golf oo lagu daray ogaanshaha jasiiradaha.
Daabacaadii 3aad, oo dhacday intii u dhaxaysay 10kii iyo 20kii Diseembar, waxay keentay goleyaasha Faransiiska ee La Reunion ee Koorasyada Golf-ka ee Bourbon iyo Bassin Bleu. Marxalad labaad ayaa markaa u horseeday cagaarka Anahita Golf Club iyo Île aux Cerfs Golf ee Mauritius.
19 kooxood oo ka kooban afar ciyaartoy (1 xirfadle iyo 3 hiwaayad ah) ayaa si fool ka fool ah isugu soo baxay intii lagu jiray 6 wareeg ee tartanka.
Habeenimadii abaal-marin-bixinta ah ee lagu soo agaasimay Anahita habeenimadii Arbacada ee la soo dhaafay ayaa markaas soo xidhay qaybta ciyaaraha ee safarka. Dhammaan ka qaybgalayaasha ayaa wakhtigan la abaalmariyey, sidii caadada ahayd.
Dhibcaha guud ee 412 dhibcood, kooxda xirfadleyda Patrice Barquez, Jean Loup Duvail, Benjamin Legueu iyo Richard Pellissero ayaa ku guuleystay kaalinta 1aad ee tartankan Pro-Am ee Jasiiradaha Vanilla.
Kooxda xirfadleyda Leonard Bem, Catherine Ouvrard et Jean Pierre Ouvrard ayaa u kacay kaalinta 1-aad ee dhibcaha shabaqa, iyagoo leh 533 dhibcood. Leonard Bem, sidaas darteed wuxuu ku guuleystey laba abaalmarin jasiiradaha ka dib markii uu ku guuleystay French Open Doubles on Reunion dhowr maalmood ka hor.
Marka laga soo tago natiijooyinka ciyaaraha, dhammaan ka qaybgalayaashu waxay sheegeen inay dareemeen ku qanacsanaanta adeegyada iyo faa'iidooyinka la bixiyo intii ay joogeen oo ay mar horeba jeclaan lahaayeen inay soo noqdaan.
Badi iyagaa daacad u ahaa ururka ilaa daabacaaddii 1aad! Caddaynta tani waa tayada badeecada la abuuray dhammaan shuraakada Badweynta Hindiya.
Waxa kale oo jira faa'iidooyin dhaqaale oo la taaban karo. Tani waxay tusinaysaa ururka dariiqa loo maro mustaqbalka.
Pascal VIROLEAU, Agaasimaha Jasiiradaha Vanilla, “mar labaad sanadkan, dhacdada waxay ahayd guul. Waxay tusinaysaa adduunka intiisa kale tayada koorsooyinka iyo adeegyada, si loo soo jiito dalxiisayaal cusub.
Isku dhafka dhacdada jasiiradaha dhexdooda waa lama huraan iyo iskaashiga ka dhexeeya labada jasiiradood wuxuu qaadanayaa macne cusub.
Waxaan samaynay horumar dhan walba ah oo hay'adda ah. Waxaa jira heer aad u sarreeya oo lagu qanacsan yahay in daabacaadda afaraad ay hadda ku jirto kaararka. "
anahita French Open golf Indian Ocean Ocean
Booqdayaasha Israel ayaa hadda Shalom u sheegaya Tansaaniya
Ku bixiya Ciidaha Buurta Kilimanjaro
Tilmaamaha Dhaqanka Cusub ee Kiliinikada ee Kansarka Naadirka ah...
Digniin Caafimadka Qaranka: Isbeddellada Faafida ah ee Kor u qaadaya...
La qabsiga Cadaadiska Faafa ee raagay
Baaxadda Suuqa Daaweynta Ankylosing Spondylitis, La wadaag
Ruushka ayaa ku hanjabaya 'saaxiib-darro' reer galbeedka...
Dad badan oo reer Yukreeniyaan ah oo cusub: Wow!
4 ka mid ah magaalooyinka aduunka ugu nasashada badan waxay ku yaalaan US
Hindiya Cajiibka Ah Waxay Soo Dhaweysay Munaasabadda Dalxiiska Caalamiga ah ee Daahfurka
Guddoomiyaha Gobolka Bayelsa oo ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan...
Daawaynta cusub ee Maraykanka ee dadka waaweyn ee la nool hurdo la'aanta
Warbixin Cusub oo ku saabsan Waayeelka iyo Caafimaadka Maskaxda Inta lagu jiro COVID-19
Magaalada New York waxay martigelin doontaa 2023 SITE Global Conference